Kaddib guushii wayneyd ay Barca ka gaartay kulanka El Calsico, Jordi Alba oo rajeynaya in macallinka Real Madrid uu….. – Gool FM
Kaddib guushii wayneyd ay Barca ka gaartay kulanka El Calsico, Jordi Alba oo rajeynaya in macallinka Real Madrid uu…..
(Barcelona) 29 Okt 2018. Jordi Alba ayaa u rajeeyay tababare Julen Lopetegui inuu sii wato shaqadiisa kooxda Real Madrid inkastoo ay guuldaro xanuun badan kasoo gaartay kulankii El Clasico.
Kooxda Barcelona ayaa kusoo gabagabeesay kulankii El Clasico ee ka dhacay garoonka Camp Nou guul 5-1 ay kaga gaartay Real Madrid, kulankan ayaana ka tirsanaa kulamada 10-aad horyaalka La Liga ee xili ciyaareedkan.
“Waxaan rajeynayaa in Julen Lopetegui uu sii wadan doono shaqadiisa kooxda Real Madrid, wuxuu iga caawiyay wax badan, sidaas darteed waxaan u rajeenayaa wanaag oo dhan”.
Dhinaca kale difaaca garab bidix ee kooxda Barcelona Jordi Alba ayaa wuxuu ka hadly fikirkiisa kaga aadan in Luis Enrique aanu kusoo darsan liiskiisa kulamadii lasoo dhaafay.
“Wuxuu iga reebay xulka qaranka, taasi waa go’aankiisa, hada waxaan doonayaa in wax walba aan kusoo bandhigo kooxda Barcelona, inkastuu xulk i dooneynin”.
“”Waan ku raaxeysan karaa fasaxa qoyskeyga, hadii uu Luis Enrique dooneynin inuu ii yeero, laakiin si walbo ay ahaato waxaan doonayaa inaan dib ugu laabto”.
“Wax walba way inoo fududahay joogitaanka Lionel Messi, dabcan si wanaagsan ayaan u ciyaareynaa marka uu nala joogo, lakiin waan ku faraxsanahay, sababtoo ah qof walba ayaa talaabo hore u qaaday isaga la’aantiis”.
Muxuu ka yiri Mourinho guushii ay Xalay ka gaareen Everton???
Saakay iyo Wararkii ugu dambeeyay ee MUSIIBADII Premier League....(Milkiilaha Leicester City oo GEERIYOODAY iyo waliba....)